ब्राजिलका चुनावहरूमा मैले के गर्नुपर्छ? - 1aviagem.com
अघिल्लो पोस्ट: यो कसरी एक करोडपति हुन लाग्छ? (भियतनाम)
अर्को पोस्ट: अन्तर्वार्ता: क्यानाडा कस्तो छ? क्यानाडियनद्वारा
पोष्ट गरिएको 23 अक्टोबर 20183समीक्षाहरू द्वारा रोमोमो लुकाना
म राजनीति को यो शाखा मा नहीं जाऊँगा तर ब्राजीलियन को लागी मलाई ऐसा गर्न मजबूर लाग्यो। शायद ढिलाइ, तर सँधै भन्दा ढिलो।
मैले यहाँ चुनावको लागि मतदाताको लागि 8 सुझावहरू छुटेको छु। यसलाई काम गर्नुहोस्!
1- जानकारी जाँच गर्नुहोस्:
कुराकानी सुरू गर्न, साझेदारी गर्नु अघि जानकारी जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाईंले पहिलेको जानकारीको सत्यता जाँच गर्नुभएन भने व्हाट्सएपको हेक्टिक एक्टिस्टिस्टको कुनै प्रयोग छैन।
यदि तपाईंले नक्कली समाचार प्रयोग गर्नुहुन्छ (यो शब्द डोनल्डड ट्रम्पको लागि लोकप्रिय बनियो) त्यसपछि तपाइँ उम्मेदवारीमा आक्रमण गर्न चाहानुहुन्छ तपाईं झूटो हुनुहुन्छ।
2 सत्य साझा गर्नुहोस्।
त्यो तपाईंको उम्मेद्वार चलाउँछ।
3- ब्राजीलियनहरूलाई स्क्यान गर्न रोक्नुहोस्।
यी चुनावहरू पहिले देखि नै विचित्र छन्। त्यसैले जब तपाईं रहस्यमय समर्थक हुनुहुन्न ((जो रूस हो, त्यसो भए ब्राजिलमा मतदान गर्नुहोस्) मतदातालाई धम्की दिने रोक्नुहोस् भने यदि सबैले फर्नान्डो हडद जित्नेछन् भने सबैलाई हटाइनेछ। वा पनि सबैले जेयर बोल्सनोले जितेपछि परिवार पर्स गुमाउनेछन्। यो दुवै पक्षमा झूट छ।
4- सम्झनुहोस् कि urn तपाईंको मतको लागि स्वत: पूर्ण प्रकार्य छैन।
तपाईंको स्मार्टफोनको विपरीत, urnले तपाइँको मतलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित गर्न सक्ने क्षमता छैन। त्यसैले तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा अवगत हुनुहोस्। राष्ट्रपतिको लागि मतदान गर्दा यो ध्यानमा राख्नुहोस्। जब तपाइँ 1 थिच्नुहुन्छ ... अर्को नम्बर तपाईंको जोखिममा छ। एक स्मार्ट मतदाता हुनुहोस्। ओह र त्यसपछि तपाईलाई पुष्टि गर्नु पर्दछ।
5- तपाइँको उम्मेदवारको डिप्लोय को को लागी हेर्नुहोस्
तपाइँ राम्रो तरिकाले सम्झनुहुन्छ कि अन्तिम चुनावमा के भयो? त्यसपछि हेर्नुहोस् कि तपाइँको उम्मेद्वारको उपाध्यक्ष पहिलो, आफ्नो जीवन खोज्नुहोस्। Urn मा पुष्टि गर्न पछि यो यसले इतिहास संग आउन मद्दत गर्दैन कि "झन्डा थियो।" तपाईंसँग अझै पनि यसको लागि5दिनहरू छन्। र Google ले धेरै सहयोग गर्दछ।
त्यसपछि यो भन्न को लागी योग्य छैन कि तपाईंले मतदान गर्नुभयो र केवल गंधमा बसिरहनुभयो!
6- तपाईंको उम्मेद्वारको सरकारी योजना पढ्नुहोस्।
मलाई थाहा छ, तिनीहरू पनि पूरा हुन्छन्, तर सम्झनुहोस् कि4वर्ष जनादेशको रूपमा सम्झनुहोस् ताकि मानिसहरू साँच्चै आवश्यक छ (सॉसेज भर्नुहोस्) आफ्नो शासकीय योजनामा ​​धेरै लेख्नुहोस्। तर पढाइ साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ।
उनीहरूको जीवनलाई TSE को लिङ्कमा सरकारको दुई योजनाहरू पछ्याउनको लागि:
सरकारी प्रस्ताव फर्नांडो हडद: डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
सरकारी प्रस्ताव जेयर बोल्सनोरो: डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
वा तल क्लिक गर्नुहोस् TSE पृष्ठमा जानुहोस्, यदि यो तपाईंको स्मार्टफोनमा खुला छैन http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/propostas-de-candidatos
7- यसो भन्दै रोक्नुहोस् कि यदि हावा-र-त्यसैले तपाईँले जित्नुहुन्छ, तपाई ब्राजिल बाहिर बाँचिरहनु हुन्छ।
सत्य बोल्दै, हामी यो सम्पूर्ण संकट पछि भागेको छौँ, हामीसँग पैसा राख्न को लागी पैसा छैन, जुन ब्राजील बाहिर बाँच्न भन्नेछ।
यी चुनावको अन्त्यमा हामी सबैले 2014 कपको उन्मूलन पछि डेभिड लुइजसँग समान हुनेछौं। र हामी घर फर्कन सकेनौं, किनकि हामी घरमै थिए र हामीले अझै पनि7× 1 पाउनुभयो।
8- चुनावको कारण मित्रताहरू भंग नगर्नुहोस्।
यी चुनावमा राष्ट्रपतिको लागि हामीले विकल्पहरू हेरिरहेका छु। म केवल गणतन्त्रको उत्सव पूर्व राष्ट्रपतिबाट उद्धृत गर्न सक्दिनँ:
"मैले सोचेँ जसले कसैलाई जित्छ वा हराउँछ भने जित्न वा हराउनेछ। सबैजना हराउनेछन्। "(रौसेफ, दिल्मा)
यसलाई दिमाग र राम्रो चुनावमा राख्नुहोस्।
तलको नक्सामा क्लिक गरी ब्लगको बारे बढि जान्नुहोस्।
दिनको दिन 28 / 10 / 2018 जुन दिनको दिन हो।
कसरी 2018 28 / 10 / 2018 मित्रता Bolsonaro ब्राजिल ब्राजिल डेविड लुइज Dilma डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव मतदाता फर्नान्डो Haddad जेयर बाहिर बस्नुहोस् सरकारी योजना राष्ट्रपति स्मार्टफोन रहस्यमय समर्थक tse सत्य Vice मत
24 अक्टोबर 2018 01 गर्न: 28
पोस्ट, जानकारीपूर्ण र रमाइलो मन पर्यो! धन्यवाद !!!
24 अक्टोबर 2018 07 गर्न: 38
म तिमीलाई धन्यवाद। (आई.ए.
25 अक्टोबर 2018 12 गर्न: 11
नमस्कार, एलेन, धन्यवाद। आशा छ कि मानिसहरूले मतदान गर्नु अघि यी सुझावहरू देख्नेछन्। धन्यवाद।